အားလုံးခွေးအကြောင်းကို, အောက်တိုဘာလ 2021
Leonbergers (သို့) လီယိုသည်သူတို့သူငယ်ချင်းများနှင့်သိကျွမ်းကြသောကြောင့်ကလေးများ၊ အခြားတိရစ္ဆာန်များနှင့်ရေများကိုချစ်မြတ်နိုးသည့်သစ္စာစောင့်သိပြီးအဝေးမှထွက်လာသော“ ခြင်္သေ့များ” ဖြစ်သည်။ ၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ လီယွန်ဘာ့ဂ်မှစတင်ခဲ့သောဤအံ့ဖွယ်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သောမိသားစုခွေးများသည်ဂျာမန်စင်ကြယ်သောမျိုးစိတ်များ၏ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီနှင့်စကင်ဒီနေးဗီးယားတို့တွင်အတော်အတန်လူသိများသော်လည်း၎င်းတို့ကိုဆက်လက်လေ့လာရန် ... ဆက်ဖတ်ရန်
၉ Rottweiler အကြောင်းမေးခွန်းများအဖြေ
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ထဲမှကျော်ကြားသော Rottweiler အကြောင်းနှင့်ဤအကြောင်းပြချက်သည်ရှေးရောမခေတ်ကတည်းကအဖော်နှင့်အလုပ်အတွက်အဘယ်ကြောင့်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ရကြောင်းလေ့လာပါ။
Vizsla သို့မဟုတ်ဟန်ဂေရီယို Pointer သည်ရှေးအကျဆုံးအားကစားမျိုးစိတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မုဆိုးနှင့်ဟန်ဂေရီလူမျိုးတို့၏အဖော်ဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏အမည်အားနိုးကြားမှုနှင့်တုန့်ပြန်မှုဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသော Vizsla သည်မြေယာပိုင်ဆိုင်သောမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များက၎င်း၏အမဲလိုက်စွမ်းရည်များ၊ အဆိုပါ Vizsla ရဲ့ကျက်စားရာနေရာ ... Read more
Pitbull Breeds ရရှိသောမီဒီယာအာရုံစိုက်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်အများစုသည်ဤခွေးအားချက်ချင်းခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းအတွက်တော်တော်လေးယုံကြည်မှုရှိလိမ့်မည်သေချာသည်။ မင်း sur sur လား
သေးငယ်သော Husky ဆိုတာဘာလဲ။ လူတိုင်းကဘာကြောင့်တစ်ခုလိုချင်တာလဲ။
ပြာများသည်သူတို့၏ဝံပုလွေတို့၏လှည့်စားမှုများနှင့်စွဲမက်ဖွယ်မျက်လုံးများကြောင့်ကျော်ကြားပြီးဖြစ်သော်လည်း Miniature Husky နှင့်သင်တွေ့ဖူးပါသလား။
Sweet နှင့် Spunky Chihuahua Yorkie ရောနှောမှုအတွက် Ultimate Guide
Chihuahua Yorkie ရောနှောခြင်းသည်ကောင်းမွန်ပြီးဖော်ရွေသောအရာဖြစ်သည်။ ဒီချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနိမ့်အမြင့်သည်အဖော်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံပန်းသဏ္significantlyာန်အရသိသိသာသာကျယ်ပြန့်စွာဖြင့်ဂျာမန် Shepherd Golden Retriever Mix သည်ဥာဏ်ရည်ရှိပြီးလေ့ကျင့်နိုင်သောမျိုးစပ်ဖြစ်ပြီးဂျာမန်ကိုရောစပ်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်
Havanese ကစားစရာခွေးများ ချစ်စရာပိုးကောင်ကလေးအကြောင်းသိချင်ရင်
ဒီခရင်မ်လေးဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေရှိတယ်။ တစ်ချိန်ကမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များ၏ဒူးထောက်သောအခါ, သူတို့ကငါတို့ကိုဘုံရိုးရာယခုငါတို့ရရှိနိုင်ပါသည်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အဘို့ပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။ Havana ပိုးခွေး၊ Havana Spaniel၊ စပိန်ပိုး poodle၊ Bichon Habanero စသည်ဖြင့်လူသိများသော Havanese တို့တွင်ပိုမိုအားကောင်းသော ... Read more
အနီရောင် Heeler အကြောင်းကိုမသေချာမရေရာ? ဤတွင်သင်သိရန်လိုအပ်သောအရာကိုပါပဲ
အနီရောင်ဟီလာသည်အလုပ်ကြိုးစားသောခွေးတစ်ကောင်မျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏သစ္စာစောင့်သိသောသဘောသဘာဝနှင့်ထောက်လှမ်းရေးကလည်း၎င်းကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်မွေးထုတ်ပေးသည်။ ဒီလုံ့လဝီရိယဖောက်အကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ!
ငါတို့ခွေးပိုင်ရှင်တွေအားလုံးဟာအဲဒီခွေးပိုင်ရှင်မဟုတ်သူတွေဆီကအကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ဖူးတယ်။ ကြောင်းစုစုပေါင်းပါပဲ '။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်မတူပါ
Chorkie: ဤအရာကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ Sassy Yorkie Chihuahua Mix
American Alsatian - နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့iantရာမသို့မဟုတ်အဖျက်ဖျက်ခွေးလား။
Havapoo ဆိုတာဘာလဲ - Havanese သေးသေးလေး Poodle ရောစပ်ခြင်း
အလုပ်ကြိုးစားသောမိသားစုခွေး - အင်္ဂလိပ်သိုးထိန်းကိုလေ့လာပါ
Curly Coated Retriever - သင်သိထားသင့်သမျှ
maltese ကို shih tzu နှင့်ရောထားသည်
mini aussie cocker spaniel ရောမွှေပါ
အနက်ရောင်နှင့် tan bluetick beagle